Best Nootropic Stack လမ်းညွှန် - သင်သိသင့်သိထိုက်သောအရာများ [၅ နှစ်အတွေ့အကြုံ]
ယနေ့ စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ, ထို့အပြင် nootropics အဖြစ်လူသိများ, များစွာသောလူများအတွက်ချစ်ခင်ဖြစ်လာသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းတို့သည်နေ့စဉ်ဘဝကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောလူသိများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြာရှည်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နိုးနိုးကြားကြားရှိ ဦး နှောက်တို့မှ nootropic အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။
မှတ်မိဖို့သိပ်မကောင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိပြီး၊ စာမေးပွဲအောင်အောင်မြင်မြင်မကြိုးစားဘဲတက်ချင်ကြတာကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်အဆင့်မြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိသည့်သူများသည်တစ်နေ့လုံးမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းသိမ်းလိုသောသူများဖြစ်သည်။
ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်လူအချို့အသုံးပြုကြသည် nootropics နှင့်စမတ်မူးယစ်ဆေးအမှုန့် Alzheimer၊ Hunnington ရောဂါ၊ ပါကင်ဆန်နှင့် ADHD ကဲ့သို့သောမော်တာလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြordersနာများကိုစီမံရန်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သင်သည် nootropics အသုံးပြုခြင်းအားကျန်အရာများကိုကျော်ဖြတ်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။
ဒီအပိုင်းမှာထိပ်ဆုံး ၁၅ ကိုကျဉ်းတယ် nootropic မှုန် သူတို့ကိုဘာတွေထူးခြားစေတာလဲ။
မကြာသေးမီကအတိတ်ကာလကစမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းသည်တိုးတက်လာခဲ့ပြီးယခင်ကထက် nootropics ပိုမိုရရှိလာခဲ့သည်။ ဤတွင် nootropics ခွဲခြားနိုင်ပါသည်အမျိုးအစားခြောက်ခုရှိပါတယ်;
ဤရွေ့ကားကောင်တာကျော်ရောင်းချကြသည်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသောသိမြင်တိုးမြှင့်အချို့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးမှာလှုံ့ဆော်သူသို့မဟုတ်သက်သာစေသောဆေးကဲ့သို့ပြုမူခြင်းမပြုဘဲလူတစ် ဦး ၏သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားကိုအပြည့်အ ၀ နားမလည်သော်လည်းသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးစေပြီးအောက်စီဂျင်သုံးစွဲမှုသည် ဦး နှောက်၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူတို့သည်သင်အွန်လိုင်းအလွယ်တကူရှာတွေ့သောကြောင့်သူတို့အလွယ်တကူအလွယ်တကူဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားမှုအနည်းငယ်ကိုသာယခုအချိန်အထိဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ အော်ဂဲနစ် (သို့) သဘာဝဟုမှတ်ယူသောမည်သည့် nootropic မျိုးကိုမဆိုဤလူတန်းစားတွင်ပိုင်ဆိုင်သည် များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်စက်ရုံအခြေပြုပြီးသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်။ ၎င်းဆေးဝါးအတုများသည်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများသို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းများမပါ ၀ င်သောကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းစွာသုံးစွဲနိုင်သောကြောင့်ယင်းကိုမကြာခဏ ပို၍ နှစ်သက်သည်။
အဓိကချို့ယွင်းချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ဒြပ် nootropics နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းတို့အားလာဘ်မထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒြပ်စင်များကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အလွန်မြင့်မားသောဆေးများကိုသောက်သုံးရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ဗီတာမင် B အနကျအဓိပ်ပါယျ
နာမ၌ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဗီတာမင် B အနကျအဓိပ်ပါယျသည်အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိရန်အတွက် B ဗီတာမင်မှဆင်းသက်လာသော nootropics များဖြစ်သည်။ သူတို့က ဦး နှောက်ထဲမှာအချိုမှု၊ ကလိုရင်းနဲ့ dopamine အဆင့်ဆင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ ဒါက ADHD လိုဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသည့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုကုသရာတွင်အသုံးဝင်စေသည်။
သငျသညျဖြစ်ကောင်းအတိတ်ကာလ peptides အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြပြီ။ ၎င်းတို့သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇီဝဗေဒမော်လီကျူးများဖြစ်ကြပြီး၎င်းကို covalent chemical bonds များဖြင့်ဆက်စပ်ထားသည်။ သူတို့အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ကြသော်လည်း Noopept ကိုအွန်လိုင်းနှင့်စတိုးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်သည်။ မှတ်ဥာဏ်၊ စိတ်စွမ်းအင်၊ သင်ယူမှုစွမ်းရည်နှင့်နိုးနိုးကြားကြားရှိမှုတို့ကိုတိုးတက်စေသည်။
ကိုလက်စ်ကိုကိုယ်ခန္ဓာတွင်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၄ င်း၏ချို့တဲ့မှုကိုခံစားရနိုင်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်၎င်းသည်သိပ္ပံစွမ်းရည်ကိုလျော့နည်းစေပြီး ဦး နှောက်၏သာယာဝပြောမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Choline nootropics ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်၏ acetylcholine neurotransmitter များထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
Choline ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ အတူတူ stacked တဲ့အခါသူတို့မှတ်ဉာဏ်, သင်ယူမှုစွမ်းရည်များနှင့်အလုံးစုံသောစိတ်ဓါတ်များတိုးတက်လာဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြ။
ampakines များသည်မကြာသေးမီကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောအစွမ်းထက်သော nootropics အချို့ဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်ထဲရှိအချိုမှုန့်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းတို့သည်လေ့လာမှုများနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေသည့်အချိုမှုအဆင့်မြင့်မားလာစေသည်။
အကောင်းဆုံးခြုံငုံ nootropic အမှုန့်: မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံး nootropic: အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အကောင်းဆုံး nootropic:
သန့်စင်မှု ၉၈% Flmodafinil အမှုန့်
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု ၉၈% Pramiracetam အမှုန့်
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု ၉၈% Carphedon အမှုန့်
ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကူညီခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောသတိရမှုအဆင့်သို့ ဦး တည်သည်
၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာခံစားစေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာပျော်ရွှင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှု
၎င်းကိုယူပြီး ၁-၂ နာရီအတွင်းစတင်သည်
check စျေး ပိုများသောအသေးစိတ် check စျေး ပိုများသောအသေးစိတ် check စျေး ပိုများသောအသေးစိတ်
ဤတွင်ထိပ်ဆုံး Nootropics 15 ဆေးမူးယစ်ဆေးမှုန့်ဤတွင်များမှာ:
အကောင်းဆုံးခြုံငုံ nootropic အမှုန့် - Flmodafinil အမှုန့်
မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံး nootropic -Pramiracetam
အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အကောင်းဆုံး nootropic-Carphedon အမှုန့်
နိုးကြားမှုအတွက်အကောင်းဆုံး nootropic - Adrafinil Powder
အကောင်းဆုံးဉာဏ်ရည်မြှင့်တင်သူ - Fladrafinil (CRL-40,941) အမှုန့်
အကောင်းဆုံးအာရုံစိုက်မှုမြှင့်တင်ရေး - Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့်
အကောင်းဆုံးအမြန်ပြုမူသော nootropic-Noopept (GVS-111) အမှုန့်
neuroprotection-Nefiracetam Powder အတွက်အကောင်းဆုံး nootropic
အကောင်းဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု - Aniracetam အမှုန့်
Alzheimer ရောဂါကုသရာတွင်အကောင်းဆုံး nootropic - J-147 Powder
အကောင်းဆုံး antiaging nootropic-Magnesium L-Threonate အမှုန့်
နှလုံးလည်ပတ်မှုမြှင့်တင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး nootropic - Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အမှုန့်
ဆီးချိုရောဂါကုသမှုအတွက်အကောင်းဆုံး nootropic -Galantamine Hydrobromide အမှုန့်
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်အကောင်းဆုံး nootropic- ပေါင်းစပ် 7P အမှုန့်
အကောင်းဆုံး glutathione enhancer - N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester အမှုန့်
15 ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးစမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး nootropic မှုန် 2019 နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
က NAME RATING ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အကြံပြုထားသည် ဆေးတခါသောက် ဘဝတစ်ဝက်
Flmodafinil အမှုန့်5အလွန်နည်းပါး တစ်နေ့လျှင် 100-200mg 12-15 နာရီ
Pramiracetam အမှုန့်5အလွန်နည်းပါး တစ်နေ့လျှင် 600-1200mg 5-6 နာရီ
Carphedon အမှုန့်5နည်းသော တစ်နေ့လျှင် 200-750mg 3-5 နာရီ
Adrafinil အမှုန့် 4.5 နည်းသော တစ်နေ့လျှင် 600-900mg 12-15 နာရီ
Fladrafinil အမှုန့်5ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်သာရှိသည် တစ်နေ့လျှင် 100-200mg 6-7 နာရီ
Hydrafinil အမှုန့် 4.5 နည်းသော တစ်နေ့လျှင် 50-150mg 6-8 နာရီ
Noopept popwder5နည်းသော တစ်နေ့လျှင် 30-60mg 3-6 နာရီ
Nefiracetam အမှုန့် 4.5 အလွန်နည်းပါး နှုန်း 600-900mg 3-5 နာရီ
Aniracetam အမှုန့်5နည်းသော 1500mg 1-2.5 နာရီ
J-147 အမှုန့်5အများအပြားက 20-30mg 1.5-2.5 နာရီ
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အမှုန့်5နည်းသော 1500-2000mg 44 နာရီ
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အမှုန့် 4.5 အလွန်နည်းပါး 1000-2000mg 5.3 နာရီ
Galantamine Hydrobromide အမှုန့်4တော်တော်များများ 4-8mg7နာရီ
7P အမှုန့်5နည်းသော 5000mg 1-2 နာရီ
N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester အမှုန့် 4.5 နည်းသော 5000mg 5.6 နာရီ
အကောင်းဆုံးခြုံငုံ nootropic အမှုန့်
၁။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု ၉၈% Flmodafinil (CRL-1) အမှုန့် 98-40,940-90280
အလွန်ထိရောက်သော nootropic ကိုရှာဖွေနေသူတစ် ဦး သည်၎င်းကိုစနစ်ထဲသို့မထည့်သွင်းခြင်းအတွက် Flmodafinil အမှုန့်သည်အမှန်ပင်သဘောတူညီမှုဖြစ်သည်။ Flmodafinil ဆေးလိုအပ်မှုကို ၁၀၀ မှ ၂၀၀ မီလီဂရမ်နေ့စဉ်နှစ်ကြိမ်ခွဲသောကြောင့်၎င်းသည်အသုံးပြုရခြင်းအတွက် ၀ မ်းသာပါသည်။ အသုံးပြုသူများမှပေးသော Flmodafinil ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအရဤ nootropic သည်အနည်းငယ်ကိုသာယူခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုသူဌေးတစ် ဦး ဟုထင်မြင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။
histamine, orexin, glutamate နှင့် norepinephrine ပမာဏတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏သိမြင်မှုစွမ်းရည်နှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ dopamine ပြိုကွဲခြင်းကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
၎င်းသည်စျေးကွက်၌နောက်ဆုံးပေါ်အရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်စားပွဲပေါ်၌ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်အကောင်းဆုံး nootropics အမှုန့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာသင်ယူခြင်းနှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းစွမ်းရည်တိုးခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးခြင်းဖြင့်အသေးစားစိတ်ကျရောဂါကုသမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည် ADHD ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအခြေအနေများကိုလည်းကူညီသည်။ ထို့အပြင် Flmodafinil သည်နိုးကြားမှုတိုးပွားစေခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လူတစ် ဦး ၏စိတ်စွမ်းရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းတို့ကြောင့်လူသိများသည်။
Flmodafinil နှင့် Modafinil တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်ရေတွက်သောအင်္ဂါရပ်များ၊ ဥပမာ၊ Flmodafinil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ modafinil ၏နှိုင်းယှဉ်မှုများနှင့်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အတူတူပင်ဖြစ်ပုံရသော်လည်းသူတို့၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံသေနည်းသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပြီး၎င်းသည် Flmodafinil ကိုပိုမိုဇီဝရရှိနိုင်စေသည်။
Flmodafinil ၏တရားဝင်မှုသည်သင်နေထိုင်သောတိုင်းပြည်အပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာ၊ သင်သည်ကနေဒါတွင် Flmodafinil အမှုန့်များကိုဝယ်ယူရန်အတွက်သင်ဆေးညွှန်းမလိုအပ်ပါ။ ဥရောပ၌ Flmodafinil ကိုသင်ဝယ်ယူရန်သင်လိုအပ်သည်။
Flmodafinil အမှုန့်ဘယ်မှာဝယ်ရမယ်လို့သင်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာကိုမှမကြည့်သင့်ဘူး။ Flmodafinil ကိုအွန်လိုင်းတွင်ပိုမိုအဆင်ပြေ။ စျေးသက်သာစွာဝယ်ယူရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CRL-40,940 Flmodafinil အမှုန့်များကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သောတရားဝင် nootropic အမှုန့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် histamine, orexin, dopamine, glutamate နှင့် norepinephrine level ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် ၁၀၀ မှ ၂၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
2 Purity≥98% Pramiracetam Powder 68497-62-1
သင်သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးစာမေးပွဲများကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသောကျောင်းသားတစ် ဦး လား (သို့) သူတို့၏မီးခိုးရောင်ကိစ္စကိုထိန်းသိမ်းလိုသောအကြီးတန်းအဆင့်ရှိမရှိ pramiracetam သည်သင်အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခိုင်မာသည့်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်အကောင်းဆုံး nootropic ဖြစ်သည်။ Pramiracetam သည် racetam မိသားစုဝင်ဖြစ်သော်လည်း racetams ထက်အဆ ၃၀ ပိုသည်။
Pramiracetam အမှုန့်သည် ဦး နှောက်အတွင်း၌ကိုလက်စုပ်ယူမှုနှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အဓိက Pramiracetam ခံစားခွင့်များပါဝင်သည်; မည်သည့် ဦး နှောက်ဒဏ်ရာမှအာရုံနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူတိုးတက်မှု။ ၎င်းသည် amnesia ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေရန်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်လည်းကူညီသည်။
Pramiracetam stack တွင် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ acetylcholine ပမာဏကိုလျှော့ချရန်နှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် choline အရင်းအမြစ်တစ်ခုမကြာခဏပါရှိသည်။ ၎င်းကို Adrafinil, Armodafinil နှင့် Modafinil တို့ဖြင့်လည်းပုံတူကူးနိုင်သည်။ Pramiracetam နှင့် Phenylpiracetam တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါက Pramiracetam သည်နာကျင်ခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမရှိကြောင်းထင်ရှားသည်။
လက်လီသို့မဟုတ်အမြောက်အများအမှုန့် Pramiracetam ကိုဝယ်ခြင်းငှါစီစဉ်လျှင်, ပြီးတော့ငါတို့ကိုအမြဲတမ်းအားကိုးလို့ရတယ်။
hyperstimulation သို့ ဦး ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ပေး။
3 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း 98% Carphedon (Phenylpiracetam) အမှုန့် 77472-70-9
Carphedon သည် piracetam ဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီး piracetam နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြားနားချက်မှာတွဲဖက်ထားသော phenyl group ဖြစ်သည်။ ဒီအုပ်စုကြောင့် Piracetam နဲ့တူတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးဖို့ phenylpiracetam အမှုန့်သောက်သုံးမှုကပိုနည်းပြီး Piracetam ထက်အဆ ၂၀-20 ဆပိုများသည်။
Phenylpiracetam ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအများစုသည်အားပေးသောလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရာ၌၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုရူပီးရဲရင့်သည်။ ဒါ့အပြင်လူတွေကိုအအေးမိတာကိုတားဆီးပေးတယ်။ အခြားအကျိုးကျေးဇူးများတွင်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ကိုစီမံခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Phenylpiracetam ကိုအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်မသောက်သင့်ပါ၊ ၎င်းသည်အိပ်ခြင်းကိုနှောင့်ယှက်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသည်းမခံနိုင်အောင်တားဆီးရန်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်၊ ၄ ကြိမ်သို့မဟုတ်သံသရာဖြင့်ယူသင့်သည်။
4 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု 98% Adrafinil Powder 63547-13-7
သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာနိုးကြားမှုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်အိပ်ချင်စိတ်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်ဆိုပါက adrafinil အမှုန့်ကိုသောက်ရန်သင်စဉ်းစားသင့်သည်။ Adrafinil ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အများစုက၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားပိုမိုကြာရှည်သောကာလများ၌နိုးနိုးကြားကြားရှိစေရန်ကူညီရာ၌အဓိကကျကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ Adrafinil Vs. ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Modafinil ဝက်ဘဝ, အဆုံးစွန်သောပိုရှည်တ ဦး တည်းရှိပါတယ်။ Adrafinil သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၎င်း၏သက်တမ်းဝက် (half-life) ကိုပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်ကြာရှည်တည်တံ့သောသက်ရောက်မှုများရှိနေစဉ် modafinil အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
အခြား Adrafinil ဆိုးကျိုးများမှာအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်း၊ လူတစ် ဦး ၏သင်ယူမှုစွမ်းရည်တိုးတက်လာခြင်းနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုထောက်ပံ့ခြင်း။ ၎င်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဆက်နွယ်သောမနှစ်မြို့ဖွယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအများစုကိုမဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောလှုံ့ဆော်သူဟုမှတ်ယူသည်။
Adrafinil အမှုန့်အရသာရှိသောကြောင့်၎င်းကိုရေသို့မဟုတ် citrus ဖျော်ရည်များဖြင့်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်သည်။ နိုင်ငံအများစုတွင်တရား ၀ င်ဖြစ်သောကြောင့်ဆေးညွှန်းမလိုဘဲ adrafinil အမှုန့်ကိုအွန်လိုင်းတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောပမာဏသည် ၆၀၀-၉၀၀ မီလီဂရမ်ခန့်ရှိသည်။
အဆိုပါ Adrafinil သက်ရောက်မှုများ12-15 နာရီကြာသည်။
5 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု ၉၈% Fladrafinil (CRL-98) Powder 40,941-90212-80
သင်အိပ်မက်မက်ခဲ့သောအရာများထက် ကျော်လွန်၍ ဖြစ်နိုင်ချေများကိုမြင့်တက်စေနိုင်မည့်အရာတစ်ခုခုကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ Fladrafinil အမှုန့်သည်လူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရာတွင်အကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် dopamine ပြိုကွဲမှုကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများ၊
Fladrafinil သည်သူတို့၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအရ modafinil အမှုန့်နှင့်ဆင်တူသည်တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာအပိုဖလိုရိုက်မော်လီကျူးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Fladrafinil ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့အလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်သည်။
Fladrafinil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းအဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ပြင်းထန်မှုမှာမြင့်တက်နိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူကအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်, သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အွန်လိုင်း Fladrafinil ကိုဝယ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ Fladrafinil သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင်တစ်ဝှမ်း ၁၀၀ မှ ၂၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သင့်သည်။
အဆိုပါ Fladrafinil ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ခဲခဲသည်။
၎င်းသည် Adrafinil နှင့် Modafinil တို့ထက် ၃ ဆဆပိုများသည်။
6 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း 98% Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် 1689-64-1
ထို့အပြင် Fluorenol ဟုလူသိများသော Hydrafinil အမှုန့်သည် dopamine reuptake inhibitor ဖြစ်ပြီးအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားစေရန်ဖြစ်သည်။ အခြား Hydrafinil အကျိုးကျေးဇူးများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်စိတ်စွမ်းအင်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတို့ပါဝင်သည်။
Hydrafinil ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားတွင်လူတို့၏စိတ်ကိုမြှင့်တင်ရန် histamine, norepinephrine နှင့် glutamate အဆင့်များပါ ၀ င်သည်။ Hydrafinil နှင့် modafinil bioavailability နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ Hydrafinil nootropic သည်ပိုမိုတိုတောင်းသောတစ်ခုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
၎င်းကိုရောင်းချခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့်သင်ဆန္ဒရှိသည့်အချိန်မရွေး Hydrafinil (9-Fluorenol) များကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
ဒါဟာတခြား nootropics နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Hydrafinil သက်ရောက်မှုများသိမ်မွေ့ဖြစ်ထင်နေကြသည်။
7 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု 98% Noopept (GVS-111) အမှုန့် 157115-85-0
Noopept အမှုန့်သည်ဖြည့်စွက်အရာအဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာခေါ်ဝေါ်သောဒြပ်ဆိုင်ရာ nootropic ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏မိနစ်ပိုင်းအတွင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားရနိုင်ဖွယ်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သောစမတ်ဆေးဖြစ်သည်။ Noopept ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသင်သိချင်ရင်၊ ငါဘယ်လိုပြောမလဲ။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဦး နှောက်ဓာတုပစ္စည်းနှစ်မျိုးတိုးပွားစေသည်။ NGF နှင့် BDNF ။
Noopept ၏အကျိုးကျေးဇူးများတွင်မှတ်ဉာဏ်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ အတွေးအမြန်နှုန်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊
Noopept ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုတည်းသာဆေးပမာဏမြင့်မားစွာသောက်သုံးခြင်းသို့မဟုတ် Noopept nootropic အမှုန့်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Noopept ၏အားသာချက်မှာ၎င်းသည်တရား ၀ င်ပြီးနိုင်ငံအနည်းငယ်တွင်သာထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် Noopept ကိုသင်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါကသင့်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ဆေးညွှန်းလိုသည်မလိုအပ်သည်ကိုသင်ပြောပြနိုင်သည်။
အဆိုပါ Noopept သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 30-60 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအကောင်းဆုံးကိုလင်းနှင့်အတူ stacked ဖြစ်ပါတယ်။
neuroprotection အတွက်အကောင်းဆုံး nootropic
8 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု 98% Nefiracetam Powder 77191-36-7
လေဖြတ်ခြင်းကိုခံစားပြီးနောက်လူနာများစွာသည် ဦး နှောက်ပျက်စီးမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောဖမ်းဆီးရမိမှုများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Nefiracetam ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမှကာကွယ်ပေးဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် glutamate အဆင့်များမြင့်တက်ခြင်းကိုတားဆီးသော NMDA အချက်ပြမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
၎င်းသည် racetam အသင်း ၀ င်အသစ်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ သူ၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးများတွင်စိတ်ဓာတ်၊ သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်များတိုးတက်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ nefiracetam VS aniracetam နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် nefiracetam ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအများစုက၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏စိတ်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။
ဒါဟာအဆီပျော်ဝင်မူးယစ်ဆေးဖြစ်၏ ထို့ကြောင့် piracetam နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအနိမ့်ဆုံးသောက်သုံးသည့်ပမာဏသည်ပိုမိုထိရောက်သည်။
တစ်နေ့လျှင်သောက်ဆေး ၁၀၀ မီလီဂရမ်မှ ၉၀၀ မီဂရမ်သောက်သည်၊ နံနက်စောစော၌တစ်နာရီနှင့်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဒုတိယတစ်ခု။
9 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း ၉၈% Aniracetam အမှုန့် 72432-10-1
စမတ်မှုန့် aniracetam သည် ampacine nootropic ဖြစ်ပြီး piracetam ထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနှင့် AMPA receptors ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအခါ၎င်းဆုတံဆိပ်ကိုရရှိသည်။ အသုံးအများဆုံး CNS အချိုမှု receptor ။ AMPA receptors သည်အမှတ်တရများနှင့်သင်ယူမှု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။
Aniracetam အမှုန့်၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးများမှာတုံ့ပြန်မှုများတိုးလာခြင်း၊ piracetam နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပါးခြင်းကကော်ဖီတစ်ခွက်ထက်ပိုမိုအားကောင်းသည့်၎င်း၏ရလဒ်များကိုဖော်ပြခြင်းမပြုရန်ပိုလူကြိုက်များစေသည်။
Aniracetam အမှုန့်သည် ဦး နှောက်မှဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ် ဦး နှောက်မှထုတ်လုပ်သော neurotrophic factor တိုးပွားစေခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
အဆိုပါ Aniracetam သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ခွဲစိတ်ကုသမှု 1500mg ဖြစ်ပါတယ်။
တ ဦး တည်းခံစားရနိုင်ပါတယ် Aniracetam အကျိုးသက်ရောက်မှုယူပြီး ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်
10 Purity≥98% J-147 အမှုန့် 1146963-51-0
J147 အမှုန့်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်သော nootropic ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေသည်၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုနှေးစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် phenyl hydroxide အုပ်စုနှင့် curcumin ၏ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
J147 သည် mitochondria ရှိ ATP ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းမှတဆင့်အာရုံကြောဆဲလ်များကိုအသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သော ဦး နှောက်အဆိပ်မှကာကွယ်ပေးသည်။ ဤသုတေသနသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားဆေးဝါးအများစုသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားလူနာ၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိအမိုင်နိုယပ်ပြားသိုက်များကိုပစ်မှတ်ထားသောကြောင့်သုတေသီများအတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားဆေးများသည်များသောအားဖြင့်များစွာမကူညီနိုင်ပါ။
J147 လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ထိရောက်မှုရှိပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ အလားအလာရှိသော J147 စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရ J147 သည်ပါကင်ဆန်နှင့်လေဖြတ်ခြင်းကိုကုသနိုင်သည်။
J147 သည် neurogenerative ရောဂါများကုသရာတွင်ကူညီသည်။
J147 သည် mitochondria (စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ကူညီသောဆဲလ်များ) တွင်တွေ့ရသောပရိုတိန်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
အကောင်းဆုံး antiaging nootropic
11 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း 98% မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အမှုန့် 778571-57-6
သင်၏သိမြင်မှုစွမ်းရည်သည်အိုမင်းခြင်းနှင့်ပင်နဂိုအတိုင်းရှိနေနိုင်သည်ဟုစဉ်းစားဖူးပါသလား။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အမှုန့်သည် L ၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး၎င်းသည်ပိုမိုထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ထူးခြားသည့် L-threonic အက်ဆစ်မဂ္ဂနီဆီယမ်ဆားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အများဆုံးဇီဝရရှိနိုင်သောမဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
Magnesium L-Threonate အမှုန့် nootropic သည် ဦး နှောက်တွင်တွေ့ရသော hippocampus ဒေသပတ် ၀ န်းကျင်၏ Synaptic သိပ်သည်းဆကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်လူငယ်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ရှည်လျား။ တိုတောင်းသောနှင့်အလုပ်လုပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးပွားစေသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ၏အကောင်းဆုံးစံချိန်သည် 1500-2000mg ဖြစ်သည်
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကို MIT မှသုတေသီများကပထမ ဦး ဆုံးနိုဘယ်ဆုရရှိခဲ့သည်။
နှလုံး function ကိုမြှင့်တင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံး nootropic
12 Purity≥98% Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အမှုန့် 23111-00-4
Nicotinamide riboside ကလိုရိုက်အမှုန့်သည်စျေးကွက်ထဲရှိနောက်ဆုံးပေါ်နီကိုတင်းနိုက်ဒင်းနူကူလိုတိုက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဗီတာမင်ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ အားသာချက်မှာ၎င်းသည်အခြား NAD + ရှေ့ပြေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုယ်ခန္ဓာရှိတစ်ချိန်က NAD + သို့အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်
Nicotinamide riboside Chloride အမှုန့်သည်သင်၏သွေးလွှတ်ကြောများအားအသက်နှင့်ဆက်စပ်သောပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးခြင်းဖြင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ NAD + အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်အထူ၊ တောင့်တင်းမှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းဖြင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုတိုးစေသည်။
အခြား Nicotinamide riboside ကလိုရိုက်အကျိုးကျေးဇူးများတွင်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချခြင်း၊ ဂျက်လေပြွန်ကိုကုသရာတွင်အထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်ကျန်းမာသောကြွက်သားအိုမင်းခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
၎င်းသည် NAD + အဆင့်ကို ၂.၇ ဆအထိမြင့်တက်စေသည်။
အကောင်းဆုံး Nicotinamide riboside ကလိုရိုက်ဆေးသည်တစ်နေ့လျှင် 1000-2000mg ဖြစ်ပါသည်။
Nicotinamide riboside Chloride ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်မျှသာတင်ပြထားခြင်းဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။
13 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း 98% Galantamine Hydrobromide အမှုန့် 69353-21-5
ယနေ့တွင်ဆီးချိုရောဂါသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများခံစားနေရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံကောင်းတာကဒီနိုက်ထရိုဂျင်ပါ ၀ င်တဲ့ဒြပ်ပေါင်းဟာရောဂါကိုကုသရာမှာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ အင်ဆူလင်အချက်ပြလမ်းကြောင်းတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်သည်။ Galantamine Hydromide သည်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အင်ဆူလင်ကိုခုခံနိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကိုလက်စထရောအဆင့်များကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အဝလွန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
အခြား Galantamine Hydromide အသုံးပြုမှုများတွင်သိပ္ပံနည်းကျလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်းများကိုလျှော့ချရန်နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာကလေးများနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါများတွင်ရောဂါလက္ခဏာများတိုးတက်စေရန်တို့ပါဝင်သည်။
၎င်းသည်ကော့ကေးဆပ်နှင်းပွင့်များ၏ပန်းများနှင့်မီးသီးများ၊ Daffodil၊ ပင့်ကူနီနီ၊ Garanthus woronowii နှင့် Voronov တို့၏နှင်းပွင့်များမှရရှိသည်။
Galantamine Hydromide သည်ကောင်းစွာစုပ်ယူနိုင်ပြီးနှုတ်ဖြင့်ဇီဝရရှိနိုင်မှု ၉၀% ရှိသည်။
၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏မှတ်ဉာဏ်၊ အသိအမြင်နှင့်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားကဲ့သို့သောဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသောရောဂါများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်ကူညီသည်။
14 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု 98% ပေါင်းစပ် 7P အမှုန့် 1890208-58-8
ပေါင်းစပ် 7P အမှုန့်သည်အဖြူမှအဖြူရောင်ရှိသောအဖြူရောင်အမှုန့်ဖြစ်ပြီးစီးရီးဒြပ်ပေါင်းများထဲမှတစ်မျိုးကို ဖန်တီး၍ dual-действသော thromboxane receptor antagonist inhibitors ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ nootropics ဒြပ်ပေါင်း 7P အမှုန့် Vivo အတွက် axon သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး၏ ဦး ဆောင်လမ်းပြကွာဟမှု-43 အပြုသဘော axon ၏ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေး။
7P အမှုန့်အကျိုးခံစားခွင့်အချို့မှာ၊ ညှိနှိုင်းတိုးမြှင့်, အရက်နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပျက်စီးမှုကုသမှုနှင့် ဦး နှောက်န်းကျင်ဓာတ်တိုး၏တားဆီး။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏စိတ်နေစိတ်ထားကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကူညီသည်။
အကြံပြုထားသော 7P အမှုန့်သောက်သုံးသောပမာဏသည် 5000mg ခန့်ရှိသင့်သည်။
အကောင်းဆုံး glutathione enhancer
15 သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း 98% N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester အမှုန့် 59587-09-6
N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester (NACET) သည် N-acetylcysteine ​​(NAC) ၏ Ester ပုံစံဖြစ်သည်။ esterification သည် NAC ၏ lipophilicity တိုးမြှင့်မှုအား၎င်း၏ pharmacokinetics တွင်တိုးတက်စေသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည်၎င်း၏စုပ်ယူမှုကိုမြင့်မားစွာထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးပြီး၎င်းသည် cysteine ​​နှင့် NAC အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည့်ဆဲလ်များထဲသို့ပိတ်မိသွားသည်။
၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသောပါးစပ်တွင်းဇီဝရရှိနိုင်သည့် GSH ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ NACET သည် NAC ကို mucolytic agent, GSH-related antioxidant နှင့် paracetamol antidote အဖြစ်အစားထိုးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
အဘယ်အရာကို nootropics မဝယ်ခင်စဉ်းစားပါ
မှန်ကန်သော nootropic ကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်သုတေသနအနည်းငယ်လိုအပ်သော်လည်းသင်ရှာဖွေနေသောရလဒ်များကိုသင့်အားအာမခံပေးသောကြောင့်၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော nootropic ကိုရှာဖွေစဉ်စိတ်ထဲထားရမည့်အချက်များရှိပါသည်။
တစ်နေ့တစ်ကြိမ် nootropic ကိုယူပြီး၎င်းကိုမေ့ပစ်ခြင်းသည်လူအများစုကရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်တကယ့်အဓိပ္ပာယ်အရထိုကဲ့သို့သောသောက်သုံးသောကြားကာလနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောအကောင်းဆုံး nootropic ရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်ခန့်ခံယူနိုင်သည့်အရာများကိုရှာဖွေပါ၊ သို့မှသာသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်တုန်လှုပ်ဖွယ်သောက်သုံးသောပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်နေ့လုံးကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ထားသောဆေးသောက်ရန်အသုံးပြုပါ။
သင်၏ဘတ်ဂျက်ထက်ကျော်လွန်သော nootropics များကိုသင်မဝယ်လိုပါ။ သငျသညျ, သို့သော်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်၎င်းတို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများဤအရပ်မှစျေးနှုန်းမတူပဲဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရှိသည်။ မြေပဲဈေးနဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများနဲ့ nootropics ဆေးများကိုမြင့်မားစွာသောက်သုံးရန်သင်မမျှော်လင့်ပါ။ ဒါကြောင့်ဈေးအပေါဆုံးနဲ့မဖြေရှင်းခင်၊ ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ nootropics များကိုငွေပိုပေးသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင့်အိတ်ကပ်နှင့်ကိုက်ညီသည့်အရာကိုရှာဖွေပါ။
တိုင်း nootropic ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သင်၏အာရုံကိုတိုးစေနိုင်သည့်အရာတစ်ခုကိုသင်လိုချင်ပါက၎င်းသည်ထိုအရာရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကယ်၍ သင်သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါက၎င်းအတွက်အကောင်းဆုံးရောဂါကိုရှာဖွေသင့်သည်။
ထို့အပြင်အချို့သည်အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မည်သူမျှအသည်းပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့်အဆုံးသတ်မှသာကျောင်းတွင်ဤမျှကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကိုလိုလားသည်။ ပြီးနောက်သင်၏ကျန်းမာရေးသည်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပြီးသင့်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာတစ်ခုကိုသင်မယူလိုပါ။
တစ်ခါတစ်ရံပိုမိုကောင်းမွန်သောသိမြင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိစေရန်လူတစ် ဦး သည် nootropics နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအရာများကိုပေါင်းစပ်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ သင်သတိပြုရပါမည်။ အစပ်များသည်အာနိသင်တိုးစေပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုလူသိများသော်လည်းအချို့သည်သင့်အတွက်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်တစ် ဦး စီအတွက်ပါ ၀ င်သည့်အရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုအစုအပုံမဝယ်မီ၎င်းတို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပုံကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
သင်သတိထားသင့်သည့်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာ nootropic အပေါ်ပြုလုပ်သောသုတေသနပမာဏဖြစ်သည်။ အချို့သောသူများသည်လူသားများအတွက်စမ်းသပ်မှုမပြုနိုင်သော်လည်းသုတေသန၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုမှုကင်းမဲ့သည်။ ဒီခေတ်မှာသုတေသနပြုတာကျေနပ်လောက်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဆေးတွေအများကြီးရှိတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သူများကများပြားစွာပြောခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်သည်သင့်အားအကောင်းဆုံးနေရာတွင်အခြေချရန်နှင့်အလုပ်မလုပ်သော nootropic ကို ၀ ယ်ရန်အခွင့်အလမ်းနည်းစေရန်ကူညီသင့်သည်။ အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအနည်းငယ်သောသူတို့အားသွားပါ။
ယေဘူယျအားဖြင့်သင်၏ငွေကိုမည်သည့် nootropic မဆိုအသုံးမပြုမီစဉ်းစားစရာများစွာရှိသည်။ အကောင်းဆုံးရရန်သင်ပေးထားသောအချက်များအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အစွန်းကိုရှာနေကြသည်။ ငါတို့ကိုအခြားသူတွေထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ့်အရာ။ သင်သေတ္တာပြင်ပမှာစဉ်းစားပြီး nootropics အသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ဘဝကိုအလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေနိုင်သည့်နည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်ယူဆပါသလား။
Nootropics ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိသည်။ အကယ်၍ သင်တစ် ဦး သည် nootropic တစ်ခုဖြင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူသိသာသောရလဒ်များကိုသတိမပြုမိပါက၊ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပေါင်းစပ်။ ပိုမိုထူးခြားသောရလဒ်များကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော nootropic အကျိုးကျေးဇူးများအချို့ကို;
သင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတောင်မေ့သွားတဲ့နောက်အရာတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားမိပြီလား။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ရန်အခက်တွေ့နေသည့်အတွက်မပြီးဆုံးသေးသောစီမံကိန်းများနှင့်တစ်ဝက်ဖုတ်ထားသောအကြံဥာဏ်များရှိသည်ဟုခံစားရနိုင်သည်။ ဒါဆိုမင်းဘာလုပ်လဲ
သင်ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်ပိုမိုရှည်လျားသောကာလအဘို့ကူညီခြင်းအားဖြင့် nootropics ယူခြင်းကြောင်းနှင့်အတူကူညီသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၊ အလုပ်တိုင်းကိုသင်စိတ်ထဲ၌အလွန်များလွန်းသည်ဟုခံစားရသည့်အချိန်၌ပင်ထိုက်တန်သည့်ဂရုပြုမှုကိုပေးနိုင်ပါသည်။
သင်သည်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖတ်ပြီးကောင်းစွာနားလည်ပြီးဖြစ်သော်လည်းစာမေးပွဲမစမီပင်အရာရာကိုမေ့သွားသည်။ ဒါကမင်းကိုဒုက္ခမပေးသင့်ဘူး၊ nootropics ကိုယူပြီးလူ့မှတ်ဉာဏ်အတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ကြသည်။
၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတို့ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ Nootropics သည် ဦး နှောက်ဆဲလ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပေးပြီးအာရုံခံဆဲလ်များ၏ဆက်သွယ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ တိုးတက်လာသောဆက်သွယ်မှုများမှတဆင့်အချက်အလက်အချက်အလက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းများကိုတိုးမြှင့်သည်။
သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါ
ဦး နှောက်သည်ခန္ဓာကိုယ်၏အထင်ရှားဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်အစားအစာများညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်အလုပ်များသောအချိန်ဇယားများကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းခံရသည်။ Nootropics အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေရုံသာမက ဦး နှောက်၏ကျန်းမာရေးကိုလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
ဦး နှောက်ဆီသို့အောက်စီဂျင်စီးဆင်းမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ဆဲလ်များနှင့် ဦး နှောက်ဆဲလ်များအားထိန်းသိမ်းခြင်းမှတစ်ဆင့်၎င်းသည် ဦး နှောက်လှိုင်းများကိုပိုမိုထိရောက်စေသည်။
မကောင်းသောစိတ်နေခြင်းသည်သင်၏တစ်နေ့တာကိုပျက်စီးစေနိုင်သကဲ့သို့သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုသူတို့မလုပ်သင့်တော့ပေ။ ကံကောင်းထောက်မစွာသင်သည်သင်၏စိတ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိစေသောထုတ်ကုန်များရှိသည်။ Nootropics သည်ဤအရာကိုသင့်အားအာရုံစူးစိုက်စေပြီးသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အလုပ်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
Wood က S, Sage JR, Anagnostaras SG (2014) ။ "Psychostimulants နှင့်သိမှတ်ခံစားမှု: Pharmacol ။ ဗျာ 66 (1): 193-221 ။
Frati P, Kyriakou ကို C, Marinelli အီး, Vergallo GM, Zaami S, Busardò FP (2015) ။ "သိမြင်မှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်များအတွက်စမတ်ဆေးဝါးများ: ။ Curr Neuropharmacol ။ 13 (1): 5-11 ။
Giurgea, Corneliu, (JanuarY, 1977) ။ "Nootropic မူးယစ်ဆေးဝါးများ" ။ Neuro-Psychopharmacology တိုးတက်မှု။ 1: 235-247
2 ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးစမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး nootropic မှုန် 15 နှိုင်းယှဉ်
3.Best ခြုံငုံ nootropic အမှုန့်
4. Memory တိုးတက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံး nootropic
အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် 5. အကောင်းဆုံး nootropic
9. အကောင်းဆုံးအမြန်ပြုမူသော nootropic
အာရုံကြောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက် 10. အကောင်းဆုံး nootropic
12. အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကုသရာတွင်အကောင်းဆုံး nootropic
13. အကောင်းဆုံး antaging nootropic
16. သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အကောင်းဆုံး nootropic
၁၇. အကောင်းဆုံး glutathione enhancer
18. Nootropics မဝယ်ခင်စဉ်းစားရမဲ့အချက်
nootropics ၏ 19.Benefits
မတ်လ 24, 2020
Oleoylethanolamide (OEA) - အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဆေးဝါး
မတ်လ 15, 2020
Palmitoylethanolamide (PEA) သည်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေပါသလား။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2020
အကောင်းဆုံး Dehydroepiandrosterone (DHEA) ဖြည့်စွက်မှုများ
Pterostilbene V Resveratrol: သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်မည်သည့်အချက်သည်ပိုကောင်းသနည်း။
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဂလတ်သီယွန်၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ခု
နီရဲသောတဆေးဆန်မှထုတ်ယူသောဖြည့်စွက်ချက်များ - အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ဆေးညွှန်းနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ